Tsy manana fifaninanana | Martech Zone
Tsy manana fifaninanana aho
Alatsinainy, Novambra 16, 2009 Alahady, Novambra 3, 2013 Douglas Karr
Fantatro fa fieboeboana izany. Tsy izany no tiako holazaina. Isaky ny misy milaza fifaninanana amin'ny orinasa niasako dia naneso aho. Manana foana aho. Nisy nilaza tamiko indray mandeha fa tsy azo atao ny mijery any aorianao ary mbola mihazakazaka haingana ihany. Mino aho fa mandreraka orinasa ny tahotra.
Mino aho mpiara-opetition.
Tsy mpisolo vava aho tsy miraharaha ny fifaninanana nataonao… ny orinasa tsirairay dia tokony hahatakatra ny tombony azony amin'ny latabatra. Ny tena zava-dehibe noho ny tombony azo amin'ny fifaninanana dia ny misy ny lalao eo amin'ireo tombony ireo na tsia tena ilain'ny mpanjifa. Mampiroborobo ny orinasako manomboka izao ary amin'ny andro voalohany dia nandray ny asa rehetra azoko natao aho mba hahazoana antoka fa afaka mijanona ambony. Raha jerena, tsy fanapahan-kevitra tsara izany… azoko natao ny nanondro ireo tetik'asa maro ireo ary toa faly sy faly kokoa angamba ireo mpanjifa.
Ny fifantohako izao dia ny famoronana fiaraha-miasa amin'ireo masoivoho lehibe, orinasam-pifandraisana ary ny fampitomboana ny fifandraisana misy amiko amin'ireo mpanjifa be dia be. Tamin'ity herinandro ity, nanolotra fanantenana roa tsara aho fifaninanana. Izany no zavatra tokony hatao. Tsy afaka manome izany fifandraisana izany amin'ny fiheverana sahaza azy aho ary tsy manana loharanom-pahalalana ahazoana antoka ny fahombiazan'izy ireo… ka maninona no hotandindomin-doza ny lazako eo?
Eto Indianapolis dia misy vondron'olona manan-talenta lehibe afaka manome serivisy mitovy amin'izany omeko. Tian'ireo orinasa ExactTarget, Miorina amin'ny Interactive, famintinana, ary sampan-draharaha maro momba ny famolavolana tranonkala sy fampandrosoana dia manana vokatra sy serivisy azoko omena… saingy tsy hanana aho. Manana fampiasam-bola, fotodrafitrasa, fanampiana ny mpanjifa ary loharano izay tsy ananako izy ireo. Tsara kokoa ho an'ny mpanjifa izany.
Amin'ny lafiny media sosialy, misy vitsivitsy amintsika eto an-tanàna… izay inoako fa namako avokoa. Rehefa manatona ireo orinasa lehibe eto an-tanàna isika, dia samy hitondra ny fomba fijerintsika avy eo ambony latabatra. Tsy manahy ny hifaninana amin'izy ireo amin'ity sehatra ity aho. Averiko indray, manahy bebe kokoa aho fa hahazo ilay orinasa marina loharano. Raha mijery azy ireo aho ary fahombiazana dia mandresy daholo isika. Mahafinaritra ahy ny miresaka azy ireo, mahazo orinasa ny fifaninanana, ary hahazo ny antso voalohany amin'ny fotoana manaraka koa aho.
Vao tsy ela akory izay, orinasa iray (goavana) eo an-toerana no nanome ahy ny lalana hanerena ahy hanolotra tolotra maimaimpoana ho azy ireo. Notondroiko tamin'ny mpiara-miasa iray izay nanamarina ahy voalohany izy ireo. Rehefa voaroaka izy ireo dia niverina tamiko izy ireo ary nampahafantariko azy ireo fa tsy liana aho.
Etsy andaniny, misy masoivoho vitsivitsy ao an-tanàna izay mitafy avonavona ankehitriny ireo monikeran'ny fanatsarana ny motera fikarohana na ny fahaizan'ny media sosialy. Na dia tsy nanampy na iza na iza tamin'ny mpiasa niaraka tamin'io fahaiza-manao io izy ireo, na koa tsy nanana vokatra tamin'ny mpanjifa tamin'ireny kianja ireny, dia manohy mihaza ireo orinasa mitady ireo serivisy ireo izy ireo. Mpanararaotra izy ireo, manome ny serivisy rehetra anontanian'ny rehetra. Tsy tiako ny ataon'izy ireo ary miteny manohitra azy ireo matetika araka izay tratra aho.
Raha mitady a fikarohana Optimization mpamatsy, manaova fikarohana ary ho hitanao hoe iza no mandresy amin'ny fikarohana. Mora izany. Raha mitady a manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy, manatreha hetsika isam-paritra, zahao hoe iza no nanomboka ireo tambajotram-paritra nahomby, ary jereo hoe iza no manana mpanaraka marobe. Hanjary hazava tsara hoe iza no manana ny fahaizana ary iza no tsy manana. Mandao ny lalan-dranomaso ireo mpanararaotra.
Tsy mino aho fa manana fifaninanana. Ny asako dia ny mijery raha mifanaraka amin'ny fanaintainan'ny orinasa aho. Raha tsy mety aho dia mandroso. Izany no antony itomboan'ny fifamofoako, mahazo fotoana bebe kokoa hiasana amin'ny zavatra tiako aho, mahita ny valiny tadiavin'izy ireo ny mpanjifako, ary faly aho… ary mbola tapaka ihany;).
Inona ny hevitrao? Ianao ve tena manana fifaninanana ve?
Tags: raharaham-barotrafifandraisana amin'ny orinasampiara-opetitionfifaninananafiaraha-miasaFanamafisana ny varotra
Tena manandrana manatsara ny tranonkala ve i Google?
Kiritika sy Kamikaze loha loha
17 Nov 2009 amin'ny 2:48 maraina
Ny asanao dia ny mahazo antoka fa ireo orinasa te-hanao raharaham-barotra aminao dia mizara ny tanjonao sy ny soatoavina hiarahanao miasa. Fa mahafinaritra ny mahafantatra fa vita mihodina ianao ary manao izay angatahan'ny mpanjifa tsirairay anao tsotra fotsiny satria nangataka izy ireo.
17 Nov 2009 amin'ny 3:17 maraina
Ara-psikolojika dia vita aho Mat. Mbola manana ambiny sisa tavela anefa aho. 🙂
17 Nov 2009 amin'ny 2:53 maraina
"Nisy nilaza tamiko indray mandeha fa tsy azo atao ny mijery any aorianao ary mbola mihazakazaka haingana ihany."
Manaiky tanteraka aho! Vao tsy ela akory izay dia nanana orinasa roa izahay izay manolotra serivisy mitovy amin'izany ary mody liana amin'ny fampiasana ny serivisinay. Izy ireo dia somary mamelabelatra, na dia hatramin'ny manome antsika ny anaran'olona iray nanondro azy ireo aza. Ka raha nameno ny takelaka tamin'ny tranokalanay izy ireo, niantso sy namela hafatra voicemail, ary nandefa mailaka taminay raha mila fampahalalana misimisy kokoa momba ny mpanjifa ho avy. Izy ireo dia ho nandany ny fotoanany hiresaka tsara kokoa amin'ny prospect ary manome serivisy ho an'ny mpanjifa.
Mikasika ny ambiny dia manaiky ihany koa aho. Fantaro ny fahaizanao. fahaiza-manao sy loharanon-karena. Miezaha hifandray tsara amin'ireo manodidina anao. Mandresy ny rehetra avy eo.
17 Nov 2009 amin'ny 3:05 maraina
Lahatsoratra mahafinaritra, Doug. Manaiky amin'ny fo manontolo aho.
Mahaliana ny manamarika ny fandikan-teny latina tany am-boalohany tamin'ny fifaninanana dia ny "hiara-hiasa ho amin'ny fanatsarana ny rehetra." Ny fiheverana ny mpandresy sy ny resy dia natolotry ny frantsay tamin'ny taonjato faha-16. Avelao ny sahona, eh?
17 Nov 2009 amin'ny 3:18 maraina
Teny miavaka mahafinaritra, Amy! Tsy tsapako mihitsy hoe… zazalahy ve isika manararaotra izany teny izany eto Etazonia!
17 Nov 2009 tamin'ny 5:24 PM
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho fa betsaka ny olona manakarama mpamatsy vola miaraka amin'ny tanjon'ny SEO dia manandrana mahazo serivisy maimaimpoana. Misaotra an-doha.
17 Nov 2009 tamin'ny 6:49 PM
Tsy afaka mifanaraka amin'izany intsony aho. Heveriko fa be loatra ny fotoana lany amin'ny fifantohana sy amin'ny fanahiana momba ny mpifaninana. Indrindra amin'ny tsena mavitrika toy ny media sosialy sy SEO, izay mitombo haingana dia haingana, misy toerana malalaka hifaninanana, ary mety ho faty ianao satria tsy mifanaraka tsara amin'ny mpanjifa noho ny mihinana ny sakafo atoandro ny mpifaninana aminao .
17 Nov 2009 tamin'ny 10:03 PM
Doug - toy ny mahazatra, tiako ny fombanao. Nieritreritra foana aho fa raha ny momba ny referrals vs. ny fanaovanao ny raharaham-barotra, raha toa ka miafara amin'ny fahafinaretana ny mpanjifa, dia ho tsaroan'izy ireo fa faly ANAO izy ireo, na dia amin'ny referral fotsiny aza. Ny fitsangatsanganana dia tsara toy ny famelezana, sa tsy izany?
Fanampin'izay, ny ankamaroan'ny orinasa dia manome lanja ny lafin'ny fahamendrehana rehetra amin'ny fahafantarana fa mangataka zavatra izay tsy azonao na tsy tokony hiezahanao omena izy ireo ary milaza ny marina momba izany. Raha tsy manome lanja izany ny orinasa ary miahiahy fotsiny ny amin'ny fitehirizana vola kely, dia tsy tianao ho an'ny mpanjifa izany, sa tsy izany? Mora ny milaza azy ary sarotra ny manaraka azy eo amin'ny sehatry ny toekarena ankehitriny, saingy mbola teny tokony hiainana… na farafaharatsiny mba ampitondraina.
17 Nov 2009 tamin'ny 11:20 PM
Doug, mino aho fa rehefa mandany ny fotoananao sarobidy amin'ny fanahiana ny amin'izay ataon'ny fifaninanana ianao: (1) mankaleo sy tsy mifantoka, na (2) tsy fantatrao izay tokony alehanao. Ny fandrosoana fa tsy mihetsika amin'ny manodidina anao no votoatin'ny fahombiazana.
21 Nov 2009 amin'ny 3:33 maraina
Doug - Lahatsoratra tsara! Tsaroako tany am-piandohan'ny asako ny fampiasana ny teny miaramila ataon'ny maro ao amin'ny orinasa: ady, ady, tetika, tetika sns. Natahotra mafy izahay ny amin'izay ataon'ireo orinasa hafa. Miaraka amin'ny orinasako dia tsy afaka miahiahy momba ireo tovolahy hafa aho. Tokony hifantoka amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy tsara indrindra azontsika atao ho an'ny mpanjifanay izahay. Indraindray isika dia nandeha lavitra ny "fotoana mety"; tamin'ny fotoana hafa dia nampitantsika azy ireo tamin'ny olon-kafa izany. Be dia be ny manodidina, raha ny hevitro, raha mbola mifantoka amin'ny lanja entintsika eo ambony latabatra isika.
5 Jun 2012 amin'ny 1:51 AM
Tiako ny filozofianao mametraka ny filan'ny mpanjifa
voalohany satria izaho dia mpankafy lehibe manome serivisy mpanjifa miavaka. Liana te hahafantatra aho
raha miverina mankasitraka ireo orinasa andefasanao mpanjifa raha
mahita mpanjifa tsy mifanaraka aminy izy ireo. Mahazo referraly maro avy amin'izy ireo ve ianao
sa mino fotsiny ny karma tsara amin'ny fanampiana marina ny mpanjifa?